Ngwaọrụ nchịkọta Google maka iPhone na gam akporo | Martech Zone
The ukara Nchịkọta Google iPhone na Google Analytics gam akporo A tọhapụrụ ngwa mkpanaka ka ịnwere ike ịnweta weebụsaịtị Google Analytics na ngwa data gị na iPhone. Ngwa ahụ gụnyere akụkọ Real Time.
Ngwa ahụ na-eme ka nhazi akụkọ Google Analytics na njikwa maka gburugburu ebe obibi, yabụ ị ga-enweta ahụmịhe kachasị mma n'agbanyeghị ụdị ngwaọrụ ị na-eji. Dịka ọmụmaatụ, ngwa ahụ na-agbanwe ngosipụta na-akpaghị aka iji dabara nha ihuenyo gị, yana igodo ahụ dabere na imetụ na ịsachapụ kama ntụgharị ederede ọdịnala.
Nke a bụ ụfọdụ nseta ihuenyo:
Nanị mmachi na Ngwa ndị ahụ bụ nhazi na ntọala akaụntụ, dị ka imepụta akụrụngwa ma ọ bụ echiche, idezi Ebumnuche ma ọ bụ nzacha, ịtinye ndị ọrụ na ịgbanwe ikike. Njirimara ndị ahụ chọrọ ka ị banye na Akaụntụ Google Analytics gị site na iji ihe nchọgharị desktọọpụ.
Tags: ngwa nyochaandroidngwa igweGoogle Analyticsgoogle nchịkọta maka gam akporogoogle nchịkọta maka iphoneiosios ngwaiphonengwa iphone